China Silicone Coins Bhegi & Silicone mabhegi fekitori uye vagadziri | SJJ
Mari uye zvimwe zvishandiso zvakakosha asi hazvisi nyore kuwana, uye hazvina kuchena kuzviisa zvakananga mumabhegi ako, zvimwe zvinokuvadzwa kana kukweshwa kuzviisa pamwechete.
Mari uye zvimwe zvishandiso zvakakosha asi hazvisi nyore kuwana, uye hazvina kuchena kuzviisa zvakananga mumabhegi ako, zvimwe zvinokuvadzwa kana kukweshwa kuzviisa pamwechete. Iyosilicone mari kesimuhukuru hushoma uye akasiyana maumbirwo akanaka ndizvo zvinhu chaizvo kugadzirisa matambudziko. Izvo zvinogadzirwa zvemhando yepamusoro yesilicone uye iyo zipi yekudhonza kana simbi yakavharwa, inogona kubata mari nemari nezvimwe zvakasiyana kubva kune imwe neimwe. Kugadzira makesi muhukuru hukuru kunge bhegi reruoko, iwo mabhegi esilicone ayo anoshandiswa zviri nyore muhupenyu hwako hwezuva nezuva. Mavara ekumashure uye akanakisa marogo mavara anogona kuenderana iwo PMS mavara zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, uye kushambadza iwo mazano uye pfungwa dzevatsigiri vemari. Makesi esilicone emari uye masaga esilicone akasimba, anogara zvakakwana kuti ashandiswe kwenguva yakareba. Idzo dzinodzivirira mvura saka dzinogona kushandiswa mukunaya kwemamiriro ekunze, kudzivirira mota dzako, imba yako uye dzimwe nzvimbo kuti dzive dzakatota. Iwo masilicone mabhegi ari Eco-ane hushamwari uye zvakatipasa kupasa kuyedza zviyero kubva kuUSA kana kuEurope, saka inogona kushandiswa kutakura chikafu uye zvinwiwa.
Designs: 2D, 3D marogo vari kunze, zvitarisiko zvinogona customized
Kukura: Asingasviki 100 mm, kana yakagadzirirwa
Colors: Inogona kufananidza PMS mavara, kana kutevera chako chinodikanwa.
Kusungirirwa: Kuvharwa kwesimbi, Jump zvindori, Keyrings, makiyi, hoko kana kutevedzera
Pashure: Silicone Keychains
Zvadaro: Silicone Mukombe muvharo Inovhara
Mari Yemari Bhegi Keychain
Silicone Cartoon Mari Mari
silicone mari kesi
Silicone Mari Yehomwe
Silicone Mari Mari
Silicone Yakanaka Mari Mari